उपेन्द्र खड्का - | Nagarik News - Nepal Republic Media
उपेन्द्र खड्काका लेखहरु :
यस्तो छ रेखा थापाको फिटनेश सूत्र
अभिनेत्री, निर्माता तथा निर्देशक रेखा थापा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत छन्। पाँच फिट चार इन्च (५.४) कदको उचाइ भएकी उनको शारीरिक तौल ५० किलो छ। ज्यान फिट एण्ड फाइन।
उपेन्द्र खड्का १२ श्रावण २०७७ सोमबार ५ मिनेट पाठ
महामारीमा गर्भवतीको तनाव व्यवस्थापन
कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) संक्रमणको महामारीले सामान्य अवस्थामा भन्दा गर्भवती भएको अवस्थामा तनाव बढ्ने चिकित्सकको तर्क छ। गर्भवती भएको अवस्था त्यसै पनि तनावको अवस्था हो।
उपेन्द्र खड्का ९ श्रावण २०७७ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
कोरोना कहर : अव्यवस्थित व्यवस्थाले संक्रमण बढ्ने जोखिम
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणका लागि पिसिआरको दायरा कम गर्दै लगेको छ । पिसिआरको दायरै कम गरेपछि तथ्यांकमा संक्रमितको संख्या पनि कम हुने नै भयो । पिसिआर परीक्षण जाँच शून्यमा झार्ने हो भने तथ्यांकमा संक्रमितको संख्या पनि शून्य नै देखिन्छ ।
उपेन्द्र खड्का ८ श्रावण २०७७ बिहीबार ८ मिनेट पाठ
छालामा सेनिटाइजरको जोखिम
सेनिटाइजरको प्रयोगका फाइदा हुँदाहुँदै पनि यसले छालामा असर गर्ने चिकित्सक बताउँछन्। सेनिटाइजरको प्रयोगले छाला सुख्खा हुने, खस्रो हुने, चिलाउने, रातो हुनेजस्ता समस्या हुन सक्छन्। सिभिल अस्पतालका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ (डर्माटोलोजिस्ट) डा. रविन्द्र शर्मा सेनिटाइजरको प्रयोगले छालामा फोका आउने, कत्ला हुने जस्ता समस्याको जोखिम हुने बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कन्याउँदा घाउ भई छालामा संक्रमणको जोखिम त्यत्तिकै हुन्छ।
उपेन्द्र खड्का ६ श्रावण २०७७ मंगलबार ५ मिनेट पाठ
अनुसन्धानमा डुबेका चिकित्सक
डा. शेरबहादुर पुन सरुवा रोग विशेषज्ञ हुन् । काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजकका रुपमा सेवारत उनी अध्ययन–अनुसन्धानमा सूक्ष्म रुपमा चिन्तन गर्ने चिकित्सक मानिन्छन् ।
उपेन्द्र खड्का १९ वैशाख २०७७ शुक्रबार ४७ मिनेट पाठ
स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेमोग्रामको प्रयोग बढ्दै
पछिल्लो समय मेमोग्राम गर्ने अभ्यास बढिरहेको चिकित्सक बताउँछन् । मेमोग्रामले महिलाको स्तन क्यान्सरका साना गिर्खा पनि थाहा पाउने भएकाले स्तन क्यान्सर हो वा हैन भनेर निक्र्योल गर्नका लागि मेमोग्राम प्रभावकारी भएको वीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विवेक आचार्यले बताए ।
उपेन्द्र खड्का २६ चैत्र २०७६ बुधबार १३ मिनेट पाठ
मौसमी परिवर्तनमा आक्रामक इन्फ्लुएन्जा
फागुन २८ गते शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुग्दा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काउन्टरमा टिकट काट्नेको लाइन लामै थियो । अस्पतालभित्रको ओपिडी कक्षमा स्वास्थ्य जाँच गराउन पुगेका बिरामीको लाइन पनि कम थिएन ।
उपेन्द्र खड्का २६ चैत्र २०७६ बुधबार १७ मिनेट पाठ
बन्ध्याकरणमा ऊर्जाको भ्रम
विपरीत लिंगी यौन जाेडीबीच यौन सम्पर्क भएको खण्डमा गर्भ नरहोस् भन्ने उद्देश्यले स्थायी बन्ध्याकरण गर्न सकिन्छ । स्थायी बन्ध्याकरण गर्भ नरहने भरपर्दो उपाय भए पनि बन्ध्याकरणप्रति मानिसको भ्रम भने कायम रहेको चिकित्सक बताउँछन् ।
उपेन्द्र खड्का १ चैत्र २०७६ शनिबार २१ मिनेट पाठ
मनमा मौसमको प्रभाव
मौसमले मनलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । यी दुवै अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् । मौसमी परिवर्तनले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने चिकित्सक बताउँछन् । चिकित्सकका अनुसार मौसम परिवर्तन हुँदा बिरुवाले पालुवा फेरेझैं मन परिवर्तित हुन्छ ।
उपेन्द्र खड्का ४ फाल्गुन २०७६ आइतबार २५ मिनेट पाठ
पर्दा लत्रक्क फूल झपक्क
जाडो मौसम सुरु भएसँगै काठमाडौंको गोठाटारस्थित अग्रिम नर्सरीमा ‘बिग्नोनिया भेनस्टा’ फूलका बिरुवा किन्न पुग्ने ग्राहकको संख्या मनग्ये बाक्लिन्छ । अग्रिम नर्सरीका सञ्चालक अम्बरबहादुर खड्काले यो फूल जाडोमा फुल्ने भएकाले फुलेको हेरेर किन्ने ग्राहकहरु जाडो मौसममै नर्सरी पुग्ने गरेको सुनाए ।
उपेन्द्र खड्का २८ माघ २०७६ मंगलबार ११ मिनेट पाठ
केही महिनाअघि मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्यायकहाँ दुई छोराले ८० वर्षीय बुबालाई उपचारका लागि पुर्‍याए । ती वृद्ध बा हराएर भेटिएका रहेछन् ।
उपेन्द्र खड्का ८ माघ २०७६ बुधबार ३५ मिनेट पाठ
जाडोमा सुन्दर फूल फुलाउने टेक्निक (फोटो फिचर)
गर्मी मौसममा मात्रै हैन जाडो मौसममा समेत आकर्षक तथा सुन्दर फूल फुलाउन सकिन्छ । जाडो मौसममा सुन्दर फूल फूलाएर घर तथा गार्डेन झिलिमिली बनाई बेहुलीजस्तै सिंगार्न सकिन्छ । गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा फूल फूलाउँदा भने निक्कै ध्यान दिनु पर्छ ।
उपेन्द्र खड्का ५ पुस २०७६ शनिबार ९ मिनेट पाठ
अव्यवस्थित जीवनशैलीले कुपोषणको जोखिम
व्यक्ति कुपोषित हुने विभिन्न कारण हुन्छन् । अव्यवस्थित जीवनशैली कुपोषणको कारक हो । खान नपाएर भन्दा पनि सन्तुलित रुपमा भोजन गर्न नजान्दा कुपोषणको जोखिम हुने पोषणविद्को तर्क छ । पोषणविद्का अनुसार नेपालमा सामान्यतः दुई किसिमका कुपोषणका समस्या देखिन्छ ।
उपेन्द्र खड्का १७ मंसिर २०७६ मंगलबार ३१ मिनेट पाठ
पत्रकारिताको नशामा डुब्ने प्राध्यापक
प्राध्यापक पी खरेल पत्रकारिता जगतमा नौलो नाम हैन । २००९ सालमा काभ्रेको खरेलथोकमा जन्मिएका खरेलको अक्षर चिन्ने कार्य गाउँमै भयो । बुबा गणेशप्रसाद खरेल २०१६ सालमा संसद्को महासभा सदस्य भएकाले पनि छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउनुपर्नेमा सचेत थिए ।
उपेन्द्र खड्का १२ मंसिर २०७६ बिहीबार २२ मिनेट पाठ
नेपालमै सुन्दर बन्ने सर्जरी
सुन्दर देखिने चाहना सबैमा हुन्छ । तर, सबैको त्यो चाहना पूरा नहुन सक्छ । आजकाल भने सुन्दर हुन चाहनेका लागि नेपालमै विभिन्न प्रविधि भित्रिएका छन् ।
उपेन्द्र खड्का ८ कार्तिक २०७६ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
उपेन्द्र खड्काका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्